Shaqsiyaadka iyo qoysaska gaarka ah bay dhacdhacaan badan oo ku hoos jiray miisaankiisu wuxuu qorshayaal caymis kala duwan siyaasadda, iyo tani waa xanuun saameeya dakhliga qoyska iyo heerka nololeed ee. Waxay hubin fahmo muhiimadda ay leedahay bixinta khidmadda ay adkeeyey oo run ahaantii sidaas samayn, laakiin ay saamayn ku saabsan dhaqaalaha guud iyo heerka nolosha qoyskaaga aan la gaartay iyaga - si ay u baahan yihiin si ay u raadin siyaabaha loo badbaadiyo weyn on qorshayaal caymis iyaga oo aan wax u dhimin tayada qorshayaasha hadda jira. Bal qiyaas bixinta caymiska caafimaadka qoyska, guriga iyo hantida caymiska, caymiska baabuurta baabuur, caymiska iyo nolosha ka mid ah kuwa kale, waxa laga tegi lahaa in is ogow of qoyska iyo shaqeeyaan riyada iyo ujeedooyinka shaqsi ahaaneed? Jawaabta su'aashani waxa ay ka xariiqaysa sababaha waa in aad badbaadin weyn on caymiska, iyo kuwa soo socda waa sida:
i. Kor jari aad: Waad ogtahay waxa ay tahay in kor loo qaado ama loo kordhiyo lacagaha laga jari aad, aadan sameyn? Taas macnaheedu waa in aad la kordhiyo xaddiga out-of-jeebka koobaysaa aad bixiso on xaaladaha shilka ballanqaadayso waxqabadyo magdhowga caymiska. Marka aad kor u jari aad, shirkadaha caymiska aad ku arki sida yaraynta shilalka of magdhow oo ku ay si toos ah kaa yareeyo lacagta caymiska heerarka aad u awoodo - awood aad ku badbaadin weyn saabsan qorshe ah in aadan sameyn karin iyada oo aan iyo in laga yaabo suuragal ah in aan ka maqnaan laga jari sara kiciyey,.
ii. La hadal wakiilkaaga on dhimis: La hadal wakiilka ceymiska inaad si ay u falanqeeyaan siyaasad caymiska iyo qorshayaasha aad iyo aad u aragto sida aad u qalanto heerka-dhimis ku saabsan lacagta caymiska. Dad badan ayaa u qalma dhimis caymiska oo aan ka warqabin, oo waxay tageen oo ku saabsan bixinta heerka sare sababta oo ah shirkadaha caymiska ay noqon doonto mid la soo dhaafay si ay u wargeliyaan haddii aanay xidhiidh fiican la wakiiladooda ay. Wakiilada shaqadaada waa in qiimo dhimis aad iyo aad u caawin karaan inuu ku badbaadiyo weyn oo ku salaysan arrimo ay ka siyaasadda iyo qadarka qorshaha siyaasadda aad leedahay la shirkadda caymiska.
iii. Kor score credit aad: Shirkadaha caymiska aad ka fiirsan khatar weyn si loo hubiyo marka aad qabto credit rating xun. Waxa aan aad u ogaataan waa in shirkadaha caymiska qabtaan baadhitaan taariikh aad ku aragto iyo sida dhibcaha credit ama ratings yihiin. Haddii dhibcaha credit aad aad u yar yihiin ka dibna aad weeraray heerka premium sare marka ay aad caymis, laakiin marka aad u adag markaas shaqeeyaan si loo kabo kor u ratings credit aad ay yareeyo heerka lacagta caymiska. Haddii aad u bixinaayey heerka aad u sarreeya ay sabab u tahay dhibcaha credit xun ka hor iyaga oo dayactirka, markaas waa inaad u sheegtid wax ka beddelka sameeyey si ay isla markiiba saameyn ku yeelan karaan heerarka premium ladhimay.
iv. Isticmaal shirkadda isla: Tani macno caam ah: isticmaali adag isla caymiska ama shirkada si loo hubiyo inay qoyska oo dhan, hantida, caafimaadka iyo waxyaabo kale. Ama halkii, caymis baabuurta oo dhan aad la leedahay shirkadda isla caymiska; caymiska dhan caafimaadka qoyska iyo qorshayaasha caafimaad shirkad caymis; caymiska dhammaan wixii hanti ah gurigaaga iyo hantidaada shirkada isla caymiska, oo waxaad awoodi doontaa inaad si loo badbaadiyo weyn on dhammaan siyaasadaha caymiska kuwaas.
v. Xafido gurigaaga iyo baabuur: Ku rakib calaamad amni iyo qalabka loo guryihiina iyo baabuurta si looga hortago dhacdooyinka mid ka mid ah jabsiga, kharribaad iyo tuuganimada. Qalabka loo Security sida dab damiyuhu, Alaarmiga jabsiga, goobaha anti-qufulka iyo qaababka kale ee ammaanka yarayn lahaa ama loo yareeyo dhacdooyinka shilalka guryihiina iyo baabuur, oo si weyn wax aad badbaadin lahaa lacag tan iyo caymiskaaga si toos ah loo yareeyo lahaa heerka lacagta caymiska.
Tags:5 Ways Sure in Save Big On Your Insurance, Save Big On Your Insurance